निक्षेपको ब्याजदर ‘डबल डिजिटमा’, संस्थागत मुद्दती निक्षेप बैंकको प्राथमिकतामा
वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर दोहोरो अङ्क (डबल डिजिट) मा पुर्‍याएका छन् । असोज १ गतेदेखि लागु हुनेगरी वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदर केही बैंकबाहेक अधिकांशले बढाएका छन् ।
बजेट होलिडे के हो ? कहाँ कहाँ रोकियो खर्च ?
केही दिनयता तपाईंले सरकारले खर्च बजेट खर्च गर्न नपाउने, बजेट होलिडे जस्ता समाचार पढ्नु र सुन्नु भएको छ । राज्यले गर्ने अत्यावश्यक खर्च नै रोकिएर जटिल स्थिति आउन सक्ने सम्भावना पनि कतिपयले औंल्याएका छन् । यस्तो स्थिति आउनुमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीले एक अर्कालाई दोषारोपण पनि गरिरहेका छन् ।
स्कुल: खोल्दा पनि तनाव, नखोल्दा पनि तनाव
खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–१० अर्खौलेका धनबहादुर मगर कक्षा १० पढ्छन्। घरमा मोबाइल नेटवर्क राम्रोसँग नआउँदा उनी घरभन्दा पर उचाइमा रहेको एउटा रूखमै डेरा जमाएर बसेका छन्। जहाँ मोबाइल नेटवर्क राम्रो भएपछि उनले सोही रूखमा डेरा जमाएर अनलाइन कक्षा लिन थालेका छन्।
निवर्तमान सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग वर्तमान सरकारले खारेज गरेको विषय ठीक कि वेठीक भन्ने विषयमा विभिन्न तर्कहरु आइरहेका वेला वर्तमान सरकारले पुन आयोग गठन गरेको भन्ने सुन्नमा आएको छ।
भदौ १३ गते लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोले झण्डै ३ केजी कोकिनसहित अफ्रिकन नागरिक सिर्ले गामालाई पक्राउ गर्‍यो। लागूऔषध कोकिन बोकेर दक्षिण अफ्रिकको जोहानेसवर्गबाट केपटाउन, त्यहाँबाट कतारको दोहा हुँदै नेपाल आएकी गामालाई ब्यूरोको टोलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेर उनी बस्ने होटलसम्म लगेको थियो। भारतमा पर्यटक भिषा नपाएपछि नेपालमा जरिवाना तिरेर भित्रिएकी उनलाई विद्यार्थी भिषामा नेपालमा बस्दै आएकी ताञ्जेनियाकी एक युवतीले सघाएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको थियो।
अन्नपूर्ण पोष्ट - काठमाडाैं
थाहा खबर - राजु पौडेल
किशोरवय अवस्थामा प्रेमको बिउँ कोही अपरिचितसँग अंकुराउँदै थियो।
जनमत : एमसीसी भनेको के हो ?
जनता सिटामोल खान नपाएर मरिरहेका छन् तर सरकार एमसीसीको पैसामा आशा राख्दै आफ्नो भूमि अरू देशलाई सुम्पिन खोज्दैछ। सरकारमा पुगेर नेताले कोशी र महाकाली बेचिसके
सेतोपाटी - किरणकृष्ण श्रेष्ठ
मेरो स्मरणमा बागमती ठ्याक्कै कस्तो थियो, म अहिले त्यसको आकृति उतार्न सक्दिनँ। बिग्रेर अहिलेको अवस्थामा पुग्छ भन्ने पूर्वानुमान भएको भए याद गर्थें होला, मनमा फोटो खिचेर राख्थेँ होला।
‘काइतेन’ : इतिहासमा तामाङ जातिबारेको गलत व्याख्या चित्रकलामार्फत मेट्ने प्रयास
काठमाडौंप्रेस - काठमाडाैं
अस्तित्व, प्रतिरोध, आदिवासीकरण र स्वाधीनता।
त्रिपालभित्रै बित्यो ब्रोडगेज रेल्वेको एक वर्ष
यता नवनियुक्त महाप्रबन्धक निरञ्जनकुमार झा रेल सञ्चालनमा अझै केही समय लाग्ने बताउँछन्। दुई सेट रेल खरिद भएर आइसकेको लामो समय बिते पनि कानुनी तथा प्राविधिक जटिलताका कारण तत्काल रेल सञ्चालन हुने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।
बेलुनले बदलेको जीवन-कथा : मनग्य आर्जन
हरेक दिन कम्तीमा दुई वटासम्म पार्टीको लागि रङ्गीन बेलुनले कार्यक्रम स्थल सजाउने गरेका छन् जीवन श्रेष्ठले। उनले यसरी काम गर्न थालेको करीब पाँच वर्ष भयो। उनी कसरी ग्राहकको रोजाइका व्यस्त बेलुन आर्टिस्ट बने भन्ने बुझ्न भने करीब ९ वर्ष अगाडि फर्कनुपर्छ।
‘गभर्मेन्ट सटडाउन’, सरकारसँग तीन विकल्प
बजेट प्रणाली शुरू भएपछि मुलुक ‘गभर्मेन्ट सटडाउन’ (बजेटविहीन)को अवस्थामा पुगेको यो पहिलो पटक हो। प्रतिनिधि सभाले बजेट सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक टुंगो लगाउन नसकेपछि नियमित र आकस्मिक खर्च समेत अबको केही घण्टामा रोकिंदै छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका लागि चुहिने भवन बनाउने ठेकेदारसँग १४ अर्बका सरकारी ठेक्का !
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारका पालामा निर्माण शुरू भएका ठूल्ठूला सरकारी भवनको ठेक्कामा समानान्तरको हालीमुहाली रहेको पाइएको हो। यसक्रममा उसले केही विदेशी र केही स्वदेशी कम्पनीसँग जेभी (जोइन्ट भेञ्चर) मा ठेक्का सम्झौता गरेको छ।
बिबिसी - काठमाडौं
सरकारले वर्षभरि गर्ने खर्चका लागि संसद्को अनुमति चाहिने व्यवस्थाका कारण अब बजेट पारित नहुँदासम्म सरकारले सीमित विषयहरूमा बाहेक खर्च गर्न नपाउने अर्थविद्हरूले बताएका छन्।संसद्‌बाट बजेट अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी समयसीमाभित्र बजेट पारित नभएपछि सरकारलाई सीमित विषयमा बाहेक खर्च गर्न बन्देज लागेको हो।
फेरि फोन गर्नुपर्ने हो?
पहिलोपोष्ट - रवीन्द्र मानन्धर
पछिल्लो समय सेयर बजारमा लगानीकर्ताको असन्तुष्टि बढ्दो छ।
एमालेसँग मुद्दा के छ र ?
अन्नपूर्ण पोष्ट - काठमाडौँ
हामीले दुई तिहाइको पार्टीको सरकार बनाएका थियौं।
सेतोपाटी - खिलानाथ ढकाल
काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण घटे पनि जोखिम जस्ताको तस्तै रहेको सरूवारोग विशेषज्ञहरूले बताइरहेका छन्।
रातोपाटी - अरुण बराल
नेकपा एमाले एकातिर, अरू सबै दल अर्कातिर भएर चुनावी मैदानमा उत्रँदा कस्तो परिणाम आउला ? हुन त एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्तारुढ दलहरू एमालेसँग चुनाव लड्न डराइरहेको बताउने गरेका छन्। एमाले निर्वाचनदेखि नडराएको र एक्लै भिड्न तयार रहेको भन्दै हाँक दिने गरेका छन्। एमालेलाई काँग्रेसले त सक्दैन, माधव नेपाल र प्रचण्डले फुर्ती नलगाए हुन्छ भन्ने गरेका छन्। तर, कार्यकर्ताहरूको मनोबल बढाउन काम लाग्ने यस्ता अभिव्यक्ति चुनावी गणितमा कति काम लाग्लान् ? एमाले नेताहरूले यसबारे सोचेका छैनन् भन्न सकिँदैन।
गरीबहरूलाई के देश, के कालापहाड !
अनलाइनखबर - सरोज खतिवडा
अलि अगाडि पुगेपछि एउटा मोडबाट माथि गमगढी बजारको लागि ढलान गरेको ढल निकास तल खोलासम्म लगेको भेटिन्छ। अब यही बाटो भएर गमगढीवासीले छिट्टै आˆनो फोहोर खोलातिर बगाउने छन्। मनमा कता कता बिझाउँछ ! नयाँ र आधुनिक भनिने समयमा पनि हामीले यस्तो विकास किन पछ्याउँदैछौं ?
कस्तो छ हाम्रो संस्थागत स्मृति?
हिजो-अस्ति के गर्नुभयो? कहाँ जानु भयो? वा एक-दुई वर्षअघि के कस्ता क्रियाकलापमा सहभागी हुनुभएको थियो? केही क्षण अघिका मात्रै होइन, वर्षौ पहिलेका राम्रा-नराम्रा घटना याद आइराख्छन्। अर्थात, ति हाम्रो स्मृतिमा बसी राख्छन्।
जहाँ जीवनकाे आशा जगाइन्छ (भिडियाे)
श्याम मगर - पाेखरा
भाइरल ज्वरोले पनि दीर्घरोगीहरुलाई बढी असर गर्छ : डा.अनुप बास्तोला
मन्दिरा अधिकारी - काठमाडौँ
देउवा सरकारका दुई महिना: बजेटबिहीन देश, 'अवैधानिक' अवस्थामा कांग्रेस
माधव ढुङ्गेल - काठमाडौँ
लक्की घाेडामा रारा घुमाउन्या १४ वर्षीय ‘तन्नेरी’
जीवन डाँगी - रारा, मुगु
चाकडीबाज लिएर जात्रामा हिँडेको लाहुरेझैँ हुनेछन् हाम्रा नेताहरू
एमसीसी पास गर्न अमेरिकाले बढायो दबाब : देउवा पास गर्ने पक्षमा, ओलीविरुद्ध गरेको प्रचारवाजी अब प्रचण्ड–नेपाललाई भारी
माधव ढुङ्गेल - काठमाडौं
यौनिकताः भावनात्मक आकर्षण कि जैविक युद्ध ?
प्रचण्डले गरे अनपेक्षित निर्णय, अथकलाई मन्त्रीकाे लागि सिफारिश गर्दै
प्रहरीलाई साग-सब्जी जुटाइदिने र युट्युबमा अन्तर्वार्ता दिने लाेकबहादुर नै ६ जनाकाे हत्यारा!
बिएल संवाददाता - संखुवासभा
माधव नेपालसहित १४ जनाकाे सांसद पद रहने-नरहने आज छिनोफानो हुँदै
को हुन् ६ जनाकै हत्या गर्ने लोकबहादुर,लखेटी-लखेटी किन मारे ? यस्तो छ नालीबेली
तेजन खड्का - विराटनगर
काे हुन् राष्ट्रपति भण्डारीलाई फाेन गरेर ओलीकाे नामले जिस्काउने किशाेर ?
कर्णालीका उर्जा मन्त्रीसँग घरदेखि मन्त्रालयसम्म- 'जनतालाई नभेटे हाम्राे राजनीतिकाे के काम ?'
यसकारण ऋषिपञ्चमीप्रतिकाे 'विश्वास' भ्रम मात्र हाे
बिग्रदै गएकाे तीजकाे परम्पराः दारू इन् दर
प्रमिला घिसिङ - काठमाडौं